Ndị na - ahụ maka Intanet - Ole ndị bụ ụka Kraist?
Ole ndị bụ ụka nke Kraịst?
Site: Batsell Barrett Baxter
Ihe omuma ihe omuma nke ndi megharia
Otu n'ime ndị mbụ kwadoro nloghachi na Agba Ọhụụ nke Agba Ọhụrụ, dịka ụzọ isi mepụta ịdị n'otu nke ndị niile kwere ekwe na Kraịst, bụ James O'Kelly nke Chọọchị Episcopal Methodist. Na 1793, ọ hapụrụ nzukọ ogbako Baltimore nke chọọchị ya ma kpọọ ndị ọzọ ka ha sonyere ya na-ewere Bible dịka nanị otu akwụkwọ. A na-emetụta mmetụta ya n'ụzọ dị ukwuu na Virginia na North Carolina ebe akụkọ ihe mere eme na-edekọ na ihe dị ka puku mmadụ asaa ndị na-eso ụzọ ya gbasoro nduzi ya ka ha laghachi na Agba Ochie nke Agba Ọhụrụ.
Na 1802, otu ndị na-eme baptizim n'etiti ndị Baptist na New England bụ ndị Abner Jones na Elias Smith duziri. Ha na-echegbu onwe ha banyere "aha aha na denominational" ma kpebie na ha na-akpọ nanị aha Ndị Kraịst, na-ewere Akwụkwọ Nsọ dị ka onye nduzi ha. Na 1804, na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Kentucky, Barton W. Stone na ọtụtụ ndị nkwusa Presbyterian ọzọ na-ekwupụta na ha ga-ewere Bible dịka "onye nduzi na-eduzi n'eluigwe." Thomas Campbell na nwa ya nwoke a ma ama, bụ Alexander Campbell, weere ihe ndị dị otú ahụ n'afọ 1809 n'ime obodo dị ugbu a nke West Virginia. Ha na-ekwu na ọ dịghị ihe ọ bụla kwesiri itinye na Ndị Kraịst dịka ozizi nke na-adịghị aka ochie dịka Agba Ọhụụ. Ọ bụ ezie na mmegharị anọ ndị a bụ kpamkpam onwe ha na njedebe ha mesịrị ghọọ otu mweghachi mweghachi dị ike n'ihi ihe ha na-eme na arịrịọ ha. Ndị ikom a akwadoghị mmalite nke ụka ọhụrụ, mana kama ịlaghachi na chọọchị Kraịst dị ka akọwapụtara na Bible.
Ndị ụka nke Kraịst adịghị eche na onwe ha bụ ụka ọhụrụ malitere na nso mmalite nke narị afọ 19. Kama nke ahụ, a na-emegharị usoro ahụ niile ka ha mụta nwa n'oge a na-amalite ụka na Pentikọst, AD 30. Ike nke mkpesa ahụ bụ na mweghachi nke ụka mbụ Kraịst.
Ihe bụ isi bụ arịrịọ maka ịdị n'otu okpukpe nke dabeere na Bible. N'ọchịchị nke ekewawara ekewa, a kwenyere na Bible bụ nanị otu ọnụ ọgụgụ ndị nwere ike ịchọta ọnụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha nile, nke ndị na-atụ egwu Chineke nke ala ahụ nwere ike ịdị n'otu. Nke a bụ mkpesa ịlaghachi na Bible. Ọ bụ arịrịọ iji kwuo ebe Bible na-ekwu okwu na ịgbachi nkịtị ebe Bible na-agbachi nkịtị n'ihe niile gbasara okpukpe. Ọ na-ekwusi ike na na ihe ọ bụla okpukpe ga-abụ a "Otú a ka Onyenwe anyị" maka ihe niile na-eme. Ebumnobi bụ ịdị n'otu okpukpe nke ndị kwere ekwe na Kraịst. Ihe ndabere bụ Agba Ọhụụ. Usoro bụ mweghachi nke agba ohu agba ohu.
Nchịkọta atụmatụ a na-atụghị anya na-adịbeghị anya ugbu a karịa ụka nke Kraịst nke 15,000. Akwụkwọ akụkọ bụ "Christian Herald," bụ akwụkwọ na-emepụta ihe ndekọ gbasara ụka niile, na-ekwu na ọnụ ọgụgụ nke ụka nke Kraịst bụ 2,000,000 ugbu a. E nwere ihe karịrị mmadụ 7000 na-ekwusa n'ihu ọha. Ndị òtù ụka kachasị njọ na mba ndịda nke United States, karịsịa Tennessee na Texas, ọ bụ ezie na ọgbakọ dị na nke ọ bụla n'ala iri ise na na ihe karịrị iri asatọ mba ọzọ. Mgbasa ozi ala ọzọ abụwo nke ukwuu kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ na Europe, Asia na Africa. A na-akwado ndị ọrụ 450 oge zuru oke na mba ndị ọzọ. Nzukọ Kraist nke Kraist nwere okpukpu ise karia otutu ndi mmadu dika edere na Nkwukwo ndi mmadu no na 1936.
N'ọgbakọ ọ bụla, nke dị ogologo oge iji zuo ezu n'ụzọ zuru ezu, e nwere ọtụtụ ndị okenye ma ọ bụ ndị isi oche na-eje ozi dị ka òtù na-achị isi. Ndị obodo a na-ahọrọ ndị ikom a na-adabere n'ikike e depụtara na Akwụkwọ Nsọ (1 Timothy 3: 1-8). Ije ozi n'okpuru ndị okenye bụ ndị diakọn, ndị nkụzi, na ndị na-ezisa oziọma ma ọ bụ ndị ozi. Ndị nke a enweghị ikike hà nhata ma ọ bụ karịa ndị okenye. Ndị okenye bụ ndị ọzụzụ atụrụ ma ọ bụ ndị nlekọta na-eje ozi n'okpuru isi nke Kraịst dịka Agba Ọhụụ, nke bụ ụdị iwu. Enweghi ikike nke uwa karia ndi okenye nke uka.
A na-ewere akwụkwọ edemede mbụ nke akwụkwọ iri isii na isii bụ ndị mejupụtara Akwụkwọ Nsọ dị ka ndị sitere n'ike mmụọ nsọ sitere n'aka Chineke, bụ nke a na-ekwu na ha bụ ndị na-enweghị ntụpọ ma nwee ikikere. A na-ekwu maka amaokwu Akwụkwọ Nsọ iji dozie ajụjụ okpukpe ọ bụla. A na-ewere nkwupụta sitere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ okwu ikpeazụ. Akwụkwọ bụ isi nke ụka na ihe ndabere maka ikwusa ozi ọma nile bu Bible.
Ee. Nkwupụta ahụ dị na Isaiah 7: 14 dị ka amụma nke ọmụmụ nwa agbọghọ nke Kraịst. Akwukwo nke agba ohu di ka Matthew 1: 20, 25, ka anabatara ya dika okwu nke omumu nwa. A nabatara Kraist dị ka Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya, na-eme ka Chineke bụrụ onye zuru okè na nwoke zuru okè.
Naanị n'echiche bụ na Chineke na-ekpebi onye ezi omume ka a zọpụta ya ruo mgbe ebighi ebi na ndị ajọ omume ka ha wee laa n'iyi ruo mgbe ebighi ebi. Nkwenye nke Pita onyeozi, "n'eziokwu m na-aghọta na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu, kama n'ime mba ọ bụla onye na-atụ egwu ya ma na-eme ezi omume bụ onye ọ na-anakwere" (Ọrụ 10: 34-35.) Dị ka ihe egosi na Chineke ebughị ụzọ mee ka ndị mmadụ bụrụ ndị a zọpụtara ma ọ bụ furu efu ruo mgbe ebighi ebi, kama na onye ọbụla na-ekpebiri ọdịmma ya.
Okwu baptism sitere na okwu Grik "baptizo" na pụtara n'ụzọ nkịtị, "iji mikpuo, imikpu, ịba." Na mgbakwunye na okwu nkịtị nke okwu ahụ, a na-eme nmikpu n'ihi na ọ bụ omume nke ụka n'oge oge ndịozi. N'ikpeazụ, naanị nmikpu kwekọrọ na nkọwa nke baptizim dịka Pọl onyeozi nyere na Rom 6: 3-5 ebe ọ na-ekwu banyere ya dịka olili na mbilite n'ọnwụ.
Ee e. Ọ bụ naanị ndị ruru "afọ ịza ajụjụ" ka a nabatara maka baptizim. Emere ka ekwuputa na ihe omuma atu di na agba ohu bu nke ndi nuru na ekwusara ozioma ma kwere na ya. Okwukwe aghagh i ibute baptism mgbe nile, ya mere nani ndi mere agadi ka ha mata ma kwenye na ozioma bu ihe kwesiri ekwenye maka baptism.
Ndi ozi ma obu ndi nkesa nke uka enweghi ihe ndi ozo. Ha adighi ebu aha Reverend ma obu Nna, ma okwu a bu Nwanna dika ndi ozo ndi nzuko. Ha na ndị okenye na ndị ọzọ na-eme ndụmọdụ ma na-adụ ndị na-achọ enyemaka ọdụ.